Tranomboky vohizina an’i Saber Hussaini : Tantaram-panantenana ho an’i Afghanistàna · Global Voices teny Malagasy
Tranomboky vohizina an'i Saber Hussaini : Tantaram-panantenana ho an'i Afghanistàna
Nandika (fr) i Sami Abid
Voadika ny 05 Desambra 2019 5:29 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Deutsch, Français, bahasa Indonesia, Nederlands, Ελληνικά, English
Sary navoaka tao amin'ny Twitter, an'i Qessa Academy.
Ao Afghanistàna, manomboka ao an-tokantrano ny fanabeazana.
Toy ity no hafatr'i Saber Hussaini, mpanoratra iray sy mpitantara, 35 taona, nandany iray volana nandeha tongomalady (bisikilety) nitety vohitra maro, nizara boky maro natao hoan'ny ankizy tany amin'ireo tanàna nisy filàna be tamin'ny resaka vakiteny sy fandaharam-pampianarana izay tsy vitan'ny governemanta ao an-toerana ny mamatsy azy.
Aoka anefa ianareo tsy hanantena hoe hahita ny tantaran'i Saber hivoaka any amin'ny CNN, na any anatin'ireo mpampahalala vaovao malaza ao Afghanistàna.
Tsy mety amidy ireo fitantaràna miabo avy ao amin'ity firenena ity, izay misy mponina 30 tapitrisa, mahatonga ireo tantara mendrika ho tsy voajery ara-drariny, ary ilay firenena ho ratsy ny fahitàna azy. Kanefa mbola misy ihany ireo olona sy fikambanana izay, na eo aza ny herisetra sy ny ady, mbola manokan-tena miasa mafy hisian'ny hoavy mamiratra sy anaty fandriana fahalemana kokoa.
Tany amin'ny faramparan'ny Oktobra, dia noforonin'i Saber Hussaini, mpanoratra sy mpitantara, 35 taona, ny tranomboky iray mifindrafindra toerana maharakotra vohitra 5 isanandro ao afovoan'i Bamiyan, faritany iray izay ny ankamaroan'ny mponina no Hazara, ao afovoan'i Afghanistàna ao, toerana izay ahitana talantalana zara raha misy boky saingy tsy misy natao ho an'ny ankizy, na iray aza.
Tapaka ny hevitr'i Saber Hussaini fa mandritra ny fotoana malalaka ananany, ary mba ho endrika famaliana ny hetaheta mafy amin'ny resaka vakiteny ao Bamiyan, tany lavitra andriana, dia hozarainy ho an'ny ankizy any an-tsekoly ireo bokiny miisa 200.
Ilay tranomboky mifindrafindra nataon'i Saber, izay mahazaka boky manodidina ny dimy ambinifolo eo amin'ny ankapobeny, dia nalaky nahasarika ankizy marobe. Tanaty fotoana fohy monja, ireo bokin'angano, sy ireo boky misy sary notateriny teo aorian'ilay tongomaladiny dia efa nisolo toerana ireo basy plastika sy kilalao hafa tsy misy ilàna azy.
#IlayAfghànaMaherifoko dia i Saber Hussaini, ilay lehilahy manao samirery izay hampihodinana ny tranombokiny ho an'ireo ankizy any aminà vohitra 5 ao Bamiyan
Tandindon'ireo andian-taranaka niaina sy nizaka ny vokatry ny ady i Saber, andian-taranaka mangetaheta fatratra ny hahazo fanabeazana ary hiady mba hahazo izany, ary mahita ny idealiny ao anatin'ny boky sy ny penina.
Kely loatra ka tsy nahafantatra ny fotoana nisian'ny herisetra sy ny ady tsy nitsahatra raha ireo olona tamin'ny taonany, saingy tsy antitra loatra kosa ka tsy hino ny hananan'i Afghanistàna hoavy hafa kokoa.
Saeid Madadi, mpampiasa Facebook, no midera an'i Saber, amin'ny fitanisàna andalana avy aminà tononkalo iray malaza :
Ny maraina, nifoha niaraka tamin'ity vaovao ity aho. Nitsiky. “Tontolon'ny fahagagàna i Bamiyan.”
Ny tantaran'i Zainab Karimi
Mazava loatra fa tsy ho i Saber Hussaini irery no ho maherifo mpampiroborobo ny fahafahana mahazo fanabeazana ao Afghanistàna. Ramatoa Zainab Karimi, 50 taona, tato anatin'ny dimy taona farany, ary tamin'ny herimpony samirery, dia miaina koa any amin'ny faritanin'i Bamiyan, nampianatra vehivavy 500 hahay mamaky teny sy manoratra.
Tamin'ny fahalehibeazany, nanaraka fampianarana mamaky teny sy manoratra i Zainab, izay nahafahany nanohy ny fanovozam-pahalalàna hatrany amin'ny kilasy famaranana. Avy eo izy nanao mpampianatra, vonona ny hampianatra any amin'ireo vohitra ao amin'ny faritra misy azy mandrapahafoanan'ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra.
Nifanojo tamin'ny fisian'ny ady tsy nitsahatra tao Afghanistàna ny taonan'ny fahatanoran'i Zainab. Amin'ny nampianarany vehivavy an-jatony mitovy taona aminy, porofoiny am-pitiavana fa tsy afaka handresy ny fahavonoana hianatra ao anatin'ny olombelona raha izay ady.
Ny faritanin'i Bamiyan no manana ny taha avo indrindra amin'ny ankizivavy manovo fahalalalana ao amin'ny firenena. Amin'ireo ankizy 135.000 ao aminy, saika ankizivavy daholo ny antsasany.
Minoa an'i Bamiyan
Ao anaty firenena iray efa tsy manana fisokafana mankany an-dranomasina, ary tendrombohitra mahafinaritra no mihodidina azy, iray amin'ireo faritany mahantra indrindra ao Afghanistàna i Bamiyan. Mitsipozipozy zara raha mahazo fanohanana daholo ireo oniversite rehetra ao amin'ny firenena, 1000 dolara monja no mba atokana ho an'ny boky ho an'ny tsirairay amin'izy ireny.
Toa mbola indroa amin'izany no zakain'ny oniversite ao Bamiyan. Kanefa na eo aza ny fahantràny, io faritany io no mihazona ny laharana voalohany amin'ny tahan'ny fampidirana an-tsekoly ny zazalahy sy zazavavy.
Amin'ireo faritany rehetra ao Afghanistàna, mahafinaritra loatra i Bamiyan raha resaka fampidirana an-tsekoly sy fampitoviana lenta ny zazalahy sy ny zazavavy, na eo aza ny fahantràna
Tena mavitrika ireo mpianatra ao Bamiyan, ary matetika manao hetsipanoherana ny tsy fahatomombanan'ny fepetra iainany ireo mpianatry ny oniveristem-panjakana ao Bamiyan.
Tamin'ny 2013, nanao hetsipanoherana ry zareo hisarihana ny saina ho amin'ny faharatsian'ny toerana fatorian'ny mpianatra. Vao haingana kely, tamin'ny fiandohan'ny Aprily, nanao fitokonana ry zareo nanoherana ny fitsinjaràna mitanila ny tetibola, izay araka ny hevitr'izy ireo, manilikilika an'i Bamiyan..
Nodian'ny governemanta fanina ry zareo tamin'ireo zavatra roa ireo. Saingy lasa nanomboka zatra izany ry zareo. Ao Afghanistàna, tsy zo efa anananao hatrany am-pahaterahana akory ny zo hahazo fampianarana. Zo tsy maintsy hisahirananao sy hiadianao ny hananana azy io.
Azerbaijan 4 herinandro izay